စက်တင်ဘာလ 2016 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » စက်တင်ဘာလ
တွဲဘက်ရာထူးကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration: 4-6 ရက်သတ္တပတ် Casting, 10 /3/ 09 28 / 16 / 10 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အလုပ်နယူးယောက်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted 03 / 16 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘစတင်သည် အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအတွက်အထူးပြု -based သတ္တုများပုံသွန်းရုံးတစ်ကာစ်တွဲဘက်ရှာကြံနေပါတယ်။ အဆိုပါ Casting တွဲဘက်မျိုးစုံများအတွက်သတ္တုများပုံသွန်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍယူဆပါလိမ့်မယ် ...
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Portland, OR Duration:4ရက်ပေါင်း - 10 / 20, 10 / 22, 10 / 24 နှင့် 10 / 25 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘ 09 / 28 / 16 အပေါ် posted 10 / 20 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့်မဟုတ် Apply တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကူညီပေးနေလက်တို့ကိုရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ဖြစ်သည်။ ဒါကပေးဆောင်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့3နေ့ရက်ကာလအဘို့အလုပ်လုပ်4ဟာသအထူးကိုကူညီပါလိုအပ်ပါတယ်။ ...
3 / 10 /6အပေါ် posted ချုပ်ကိုင်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Ft Lauderdale, FL Duration: 09 ရက်, 28 / 16 လစာစတင်သည်ပေးမယောဘသည် 10 / 06 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply တစ်ခုအတွေ့အကြုံရှိချုပ်ကိုင်ရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား ဝိန်း Fort Lauderdale တွင် set ကိုအပေါ်ကိုကူညီပေးပါတယ်။2စတူဒီယိုရက်ပေါင်းနှင့်တည်နေရာပေါ်တဦးတည်း။ ယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်တစ်ဦးစာရင်းပေးသွင်းထားသူများအတွက်ယခု Subscribe? မှတ်ပုံတင်ရန် ကျေးဇူးပြု. ...
ထုတ်လုပ်မှုညှိနှိုင်းရေးမှူး (PA ဆိုပြီး) ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration:5ရက်ပေါင်း 10 / 17 / 09 အပေါ် posted, စတင်သည် 28 / 16 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 10 / 17 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply combo နေဆဲ / ရွေ့လျားမှုလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရိုက်ကူးများအတွက်အနည်းငယ်ဦးထုပ်ဝတ်ဆင်နိုင်သူ Ace ထုတ်လုပ်မှု COORD ။ ထုတ်လုပ်သူနှင့်အလုပ်လုပ်။ 1 ကင်းထောက်, 1 prep,2ရိုက်ကူး, 1 ထုပ်ပိုးပြီး ...
လက်ထောက်ကင်မရာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration: 10 ရက်,9/ 30 / 09 28 / 16 / 09 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အတွေ့အကြုံက NYC ရှာဖွေနေသည်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted 30 / 16 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘစတင်သည် AC အကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း join ဖို့အခြေခံပါတယ်။ ဒါကခရီးသွားပြပွဲဖြစ်ပါသည်သင်မူကားအစဉ်အမြဲနယူးယောက်ကနေစွန့်ခွာမည်ဖြစ်သည်။ တာဝန်များပါဝင်သည်: အားလုံးကင်မရာစီမံခန့်ခွဲ ...
ကို Creative န်ဆောင်မှုများဒါရိုက်တာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Seattle, 09 / 28 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည် WA Duration: ပေးမလစာပေးမယောဘကိုအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမကက်စကိတ်ပြည်သူ့မီဒီယာ၏ on-လေကြောင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, မြှင့်တင်ရေး, ဖန်တီးမှုဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သေဒဏ်စီရင်သို့ပို့ဆောင် အမှတ်တံဆိပ်မဟာဗျူဟာများ။ ဗြဲ 1 Lead KEY ကိုယောဘ Response ။ Interstitial အချိန်များအတွက်တီဗီမြှင့်တင်ရေးမဟာဗျူဟာ (ထိုချိုးဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ် ...
အသံရောနှောကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ကောလိပ်ဘူတာ, တက္ကဆပ် Duration:2ရက်, 10 /7လစာ $ 450.00 / 12 ယောဘသည် 09 / 28 / 16 10 / 07 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကျနော်တို့ရိုက်ကူးနေသောအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted စတင်သည် တစ်ဦးဘောလုံးတက္ကဆက် A & M အတူ conjuncture အတွက်ကြွက်သားနို့ဘို့အပိုင်းအစအခြေတည်။ ကိုယ်ပိုင်အသံပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာအားကောင်းစန်းဆန္ဒရှိရှိရမည်။ ဒေသခံဖြစ်ရမည် ...
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ကောလိပ်ဘူတာ, တက္ကဆပ် Duration:3ရက်, 10 /6လစာ $ 150.00 / 12 ယောဘသည် 09 / 28 / 16 10 / 06 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကျနော်တို့ရိုက်ကူးနေသောအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted စတင်သည် တစ်ဦးဘောလုံးတက္ကဆက် A & M အတူ conjuncture အတွက်ကြွက်သားနို့ဘို့အပိုင်းအစအခြေတည်။ အတှေ့အကွုံလိုအပ်သည်။ ဒေသခံသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အိုးအိမ်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ $ 150.00 / 12 ...